Ederede Liza Nebel na Martech Zone |
Edemede site na Liza Nebel
Liza bụ Onye isi ala, COO, na Co-guzobere BlueOcean, usoro atụmatụ atụmatụ AI nke na-enyere ụlọ ọrụ aka karịa asọmpi ahụ. Liza ejirila afọ 20 gara aga na-anya ụgbọ ala na atụmatụ azụmaahịa maka AT&T, Visa, Chevron, American Express, Barclays, Time Warner, IBM, na ndị ọzọ. Na BlueOcean, Liza na-eduzi ọrụ iji wuo sistemụ mmụta igwe na-edozi nsogbu ma na-enye nghọta na oke na ọsọ. Maka ọrụ ya, a mara Liza na SF Business Times 'Top 100 Women Owners Business.
Tinye n'ọrụ BlueOcean's Proprietary AI To Unlock Connected Fitness Brand Insights
Kwa afọ, ọkachasị ka anyị na-abịaru ezumike ahụ wee tụgharịa uche na mkpọsa a na-echefu echefu n’afọ, a na-enwe ọtụtụ ọgụ iji hụ ụdị ndị dọtara ndị mmadụ. Site na nchekasị na ejighị n'aka nke ọrịa ahụ butere n'afọ a, enwere ọgụ ọhụrụ, na nke ugbu a ọ bụ ọgụ maka ahụike anyị. Ka anyị na-emegharị ihe niile anyị na-eme n'ụlọ, anyị hụrụ ka ọrịa a ji eme ka ọdịnihu dị mma. Ngwa akụrụngwa dị n'ụlọ dị ka